Ch 23 मत्ती – 2माछा
घर / बाइबल / मत्ती को सुसमाचार / Ch 23 मत्ती
23:1 त्यसपछि येशूले भीडलाई कुरा, र आफ्ना चेलाहरूलाई,
23:2 यसो: "शास्त्री र फरिसीहरूले मोशाको कुर्सी मा बसे छन्.
23:3 त्यसैले, पाठका सबै कुराहरू तिनीहरूलाई तपाईँले भनौं कि, पालन ​​र के. यद्यपि साँच्चै, आफ्नो काम अनुसार कार्य गर्न छनौट छैन. उनि भन्छन् लागि, तर तिनीहरूले के छैन.
23:4 तिनीहरूले भारी र असह्य बोझ पट्टी बाँध्नु, र तिनीहरूले पुरुषहरु काँध मा तिनीहरूलाई आयातित. तर तिनीहरूले आफ्नै पनि एक औंला तिनीहरूलाई सार्न इच्छुक छन्.
23:5 साँच्चै, तिनीहरूले मानिसहरूले देख्न सक्छ भनेर तिनीहरूले सबै काम गर्न. तिनीहरूले phylacteries विस्तार र आफ्नो hems महिमा लागि.
23:6 र तिनीहरूले चाडहरूमा मा पहिलो स्थानहरू प्रेम, सभाघरहरूमा र पहिलो कुर्सियों,
23:7 यो बजार मा र अभिवादन, र मानिसहरूले मास्टर भनिन्छ गर्न.
23:8 तर तपाईं मास्टर छैन भनिन्छ हुनुपर्छ. एक लागि आफ्नो मास्टर छ, र तपाईं सबै भाइ हो.
23:9 र पृथ्वी आफ्नो बुबा मा कसैले कल गर्न छनौट छैन. एक लागि आफ्नो पिता छ, जो स्वर्गमा छ.
23:10 न त तपाईं भनिन्छ गर्नुपर्छ शिक्षकहरू. एक लागि आफ्नो शिक्षक छ, ख्रीष्टको.
23:11 तपाईं आफ्नो सेवक हुनेछ बीच जसले ठूलो छ.
23:12 तर आफूलाई जसले उच्च छ, आफूलाई एकदम तुच्छ हुनेछ. र आफूलाई जसले नम्र तुल्याए छ, उच्च गरिनेछ.
23:13 त्यसैले त: तपाईं धिक्कार, शास्त्री र फरिसीहरूको, तपाईं कपटीहरू! तपाईं मानिसहरूका सामु स्वर्गको राज्य बन्द लागि. तपाईं लागि आफूलाई प्रविष्ट छैन, र ती जो प्रवेश गर्दै, तपाईं प्रवेश गर्न दिन्छ छैन.
23:14 तपाईं शास्त्री र फरिसीहरूको धिक्कार, तपाईं कपटीहरू! तपाईं विधवा को घरहरू उपभोग लागि, लामो प्रार्थना प्रार्थना. किनभने यो, तपाईं महान् न्याय प्राप्त हुनेछ.
23:15 तपाईं धिक्कार, शास्त्री र फरिसीहरूको, तपाईं कपटीहरू! तपाईं समुद्र द्वारा र भूमि द्वारा वरिपरि यात्रा को लागि, एक परिवर्तित गर्न क्रममा. अनि उहाँले परिवर्तित गरिएको छ जब, के तपाईं आफूलाई छन् कि नरक को दुई पटक छोरा उहाँलाई बनाउन.
23:16 तपाईं धिक्कार, अन्धा गाइड, जसले भन्न: 'जसले मन्दिर sworn हुनेछ, यसलाई केही छ. तर जसले बाध्य छ मन्दिरको सुन द्वारा sworn हुनेछ। '
23:17 तपाईं मूर्ख र अन्धा छन्! जसको लागि ठूलो छ: सुन, वा सुन पवित्र भनेर मन्दिर?
23:18 र तपाईं भन्न: 'जसले वेदी द्वारा sworn हुनेछ, यसलाई केही छ. तर जसले वेदी बाध्य छ मा छ कि उपहार द्वारा sworn हुनेछ। '
23:19 कसरी अन्धा तपाईं! जसको लागि ठूलो छ: उपहार, वा उपहार पवित्र कि वेदी?
23:20 त्यसैले, जसले वेदी द्वारा swears, यसलाई द्वारा swears, र सबै द्वारा भनेर यो छ.
23:21 र जसले मन्दिर sworn हुनेछ, यसलाई द्वारा swears, र उसलाई कसले बास.
23:22 र जसले स्वर्ग द्वारा swears, परमेश्वरको सिंहासन द्वारा swears, र उसलाई कसले मा बस्छन.
23:23 तपाईं धिक्कार, शास्त्री र फरिसीहरूको, तपाईं कपटीहरू! तपाईं टंकशाला र डिल र जीरा मा दशांश सङ्कलन लागि, तर तपाईं व्यवस्था को weightier कुराहरू त्यागेर छ: न्याय र कृपा र विश्वास. यी तपाईँले गरेका गर्नुपर्छ, जबकि अरूलाई छोडिएको छैन.
23:24 तपाईं अन्धो गाइड, एक भुसुना बाहिर straining, जबकि एक उँट swallowing!
23:25 तपाईं धिक्कार, शास्त्री र फरिसीहरूको, तपाईं कपटीहरू! तपाईं सफा लागि कचौरा र थालको बाहिर के छ, तर भित्र मा तपाईं avarice र impurity भरिएका छन्.
23:26 तपाईं अन्धा फरिसी! पहिलो कचौरा र थालको को भित्र सफा, र त्यसपछि के बाहिर सफा हुन्छ छ.
23:27 तपाईं धिक्कार, शास्त्री र फरिसीहरूको, तपाईं कपटीहरू! तपाईं whitewashed sepulchers जस्तै छन्, जो बाहिरबाट मानिसहरूलाई शानदार देखिने, अझै साँच्चै, भित्र, तिनीहरूले मृत को हड्डी संग र सबै फोहर भरिएका छन्.
23:28 त्यसैले पनि, तपाईं पक्कै पनि बाहिरबाट बस हुन मानिसहरूलाई देखा. तर inwardly तपाईं कपट र iniquity भरिएका छन्.
23:29 तपाईं धिक्कार, शास्त्री र फरिसीहरूको, तपाईं कपटीहरू, जसले अगमवक्ताहरूको sepulchers निर्माण र बस को स्मारक सजाउनु.
23:30 र त तपाईं भन्न, 'हामी हाम्रो पिता को दिन मा त्यहाँ भएको थियो भने, हामी तिनीहरूको भविष्यवक्ताहरूको रगत छैन सामेल छन्। '
23:31 र यति तिमीहरू विरुद्ध साक्षी छन्, तपाईं अगमवक्ताहरू हत्या गर्नेहरूलाई छोराहरू हुन् भनेर.
23:32 पूरा, त्यसपछि, आफ्नो पिता को उपाय.
23:33 तपाईं serpents, सर्पका तपाईं brood! तपाईं नरक को न्याय कसरी उम्कन हुनेछ?
23:34 यस कारण, हेर, म तपाईंलाई अगमवक्ताहरू र wisemen पठाउन, र शास्त्री. र यी केही तपाईं मृत्युदण्ड र क्रुसमा टाँग्नुहोस् हुनेछ; र केही तपाईं आफ्नो सभाघरहरूमा महामारी र शहरमा शहर देखि खेदो गर्नेछन्,
23:35 ताकि तिमीहरूमा भएको बस सबै रगत पर्न सक्छ, जो पृथ्वीमा बगाएको छ, हाबिलको रगतले देखि बस, पनि जकरिया रगत Barachiah छोरा गर्न, जसलाई तपाईं मन्दिर र वेदी बीच हत्या.
23:36 Amen म तिमीहरूलाई भन्दछु, यी सबै कुराहरू यो पुस्ता मा गिर हुनेछ.
23:37 यरूशलेम, यरूशलेम! के तपाईं पठाइएको छ जो अगमवक्ताहरू र पत्थर ती मार्न. म कसरी अक्सर सँगै छोराछोरीलाई भेला गर्न चाहन्थे छन्, एक कुखुरा उनको पखेटामुनि उनको जवान बटोरता कि बाटो मा. तर तपाईं इच्छुक थिए!
23:38 हेर, आफ्नो घर तिमीहरूका त्यागेर गरिनेछ, वीरान होने.
23:39 म तपाईंलाई भन्न लागि, तिमी मलाई फेरि देख्ने, नगरेसम्म भन्न: 'धन्य उहाँले प्रभुको नाम मा आउछ जो छ।' "